Voice Search သည်ကုန်သွယ်ရေးအသွင်ပြောင်းခြင်း၏ထိပ်ပိုင်း၌ရှိသလား။ | Martech Zone
အဆိုပါ အမေဇုံပြပွဲ ငါနောက်ဆုံး 12 လအတွင်းငါလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဝယ်ယူဖြစ်နိုင်သည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာမှာမိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြhasနာတွေရှိနေတဲ့အမေအတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်။ အခုတော့သူမကပဲငါ့ကိုပြရန် Show ကိုပြောပြနိုင်ပြီးကျွန်တော်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ အမေကအရမ်းချစ်တာကြောင့်မြေးတွေအတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်။ ငါလည်းလုပ်နိုင်တယ် ကျဆင်းသည် ခဏနေရင်ငါခွေးဂမ်ဘီနိုကိုနှုတ်ဆက်ပါ သူကကျွန်တော့်ကိုလှောင်ပြောင်တယ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့စက်ကိုနောက်ကွယ်မှာကြည့်နေတယ်။
Apple Homepod စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စပီကာနှင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ် iOS ပေါင်းစည်းမှုတို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Google ပင်မ Android ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အတူတတ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်သည် Apple ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း Apple ၏ထိန်းချုပ်မှုယဉ်ကျေးမှုသည်ရေရှည်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ အမေဇုံတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖွင့်ထားသောဗိသုကာနှင့်သောင်းဂဏန်းရှိသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသောကျွမ်းကျင်မှု နီးပါးမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ရရှိနိုင်ပါပြီ။
သင်က Siri ကို ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ podcast ကိုစာရင်းသွင်းပြီးပါကသင် Siri ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည် Martech Interviews Podcast ကိုဖွင့်ပါ!
သင်ဂူဂဲလ်မူလနေရာတွင်ရောက်နေလျှင်သင်ပြောနိုင်သည် နောက်ဆုံးပေါ် Martech အင်တာဗျူးများ Podcast ကိုဖွင့်ပါ!
အမေဇုံအတွက်, ထည့်ပါ AnyPod ကျွမ်းကျင်မှု Martech အင်တာဗျူးများတွင်စာရင်းသွင်းရန် AnyPod အား Alexa, Alexa, Alexa ကိုတောင်းဆိုပါ။
အကျင့်ဝယ်ယူခြင်းသို့ပြန်သွားသည်… Capgemini စစ်တမ်းကောက်ယူ အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီရှိသုံးစွဲသူ ၅၀၀၀ ကျော်တို့သည်အသံထုတ်ကုန်များနှင့်မည်သို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေကြသည်ကိုရှာဖွေရန်အထူးသဖြင့်အကြောင်းဖြစ်သည် အပြုအမူဝယ်ယူ။ နီးပါးကောက်ယူခဲ့သောတိုင်းပြည်တိုင်းမှစားသုံးသူများနှင့်အဓိကအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အရေအတွက်သုတေသနကိုဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ ဤစစ်တမ်း - အာရုံစူးစိုက်မှုအုပ်စုဆွေးနွေးမှုများအပြင်လူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်သုံးစွဲသူ / အသုံးပြုသူမဟုတ်သူပုဂ္ဂိုလ်များရောနှောပါဝင်သည်။
အသံလက်ထောက်များသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စားသုံးသူများအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြုမူပုံကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။ အသံလက်ထောက်များကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည့်အရာမှာ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်ယက်လုပ်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများသည်တစ်ခါမျှမကြုံဖူးဖူးသောရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပေးစွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ voice assistants များအပေါ်ကြီးမားသောစားသုံးသူစားချင်စိတ်ကိုအမြတ်ထုတ်နိုင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရုံသာမက၎င်းတို့အတွက်သိသာသောတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ မာ့ခ်တေလာCapgemini ရှိအတွေ့အကြုံအကြီးအကဲ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံလေ့ကျင့်မှု
Voice Commerce မှစားသုံးသူစစ်တမ်း၏တွေ့ရှိချက်များ -
အသံလက်ထောက်များကအီးကောမတ်စ်ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ သုံးစွဲသူများသည် voice assistants မှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုသည့်ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဦး စားပေးမှုကိုပြုလုပ်နေသည်။ Voice assistant အသုံးပြုသူများသည်လက်ရှိသုံးစွဲသူအသုံးစရိတ်၏ ၃% ကို voice assistants များမှတဆင့်သုံးစွဲကြသော်လည်းလာမည့်သုံးနှစ်အတွင်းရုပ်မြင်သံကြားစတိုးဆိုင်များ (၄၅%) နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ (၃၇%) ကိုလျှော့ချပြီးလာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း ၁၈% အထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဂီတလွှင့်ထုတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းတို့သည်ယနေ့တွင်အသံလက်ထောက်များအတွက်အသုံးအများဆုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းဖြေဆိုသူသုံးပုံတစ်ပုံကျော် (၃၅%) သည်ကုန်စုံဆိုင်များ၊ အိမ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အဝတ်အထည်များကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုလည်းဝယ်ယူကြသည်။
သုံးစွဲသူများသည် voice assistant အတွေ့အကြုံအားဖြင့်အလွန်ကျေနပ်အားရကြသည် - အသံလက်ထောက်များကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အလွန်အပြုသဘောဆောင်ကြပြီး ၇၁% သည်သူတို့၏အသံလက်ထောက်ကိုကျေနပ်အားရကြသည်။ အထူးသဖြင့်စားသုံးသူ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်အဆင်ပြေမှု၊ လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၄၈%) နှင့်ပုံမှန်စျေးဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအလိုအလျောက် (၄၁%) ကမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအသံလက်ထောက်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်များဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ voice assistant ၏လူသားအသုံးပြုမှုကိုနားလည်ရန်စွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အသုံးပြုသူ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် voice assistant အားသူတို့၏ diction နှင့် accent တို့ကိုနားလည်စေလိုသည်။
အသံလက်ထောက်များသည်လက်လီရောင်းဝယ်သူများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည် ကောင်းမွန်သောအသံလက်ထောက်အတွေ့အကြုံများကိုပေးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်စီးပွားရေးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ voice assistant အသုံးပြုသူ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများဝေမျှနိုင်ကြောင်းနှင့်လက်ရှိအသုံးပြုသူမဟုတ်သူ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကပင်အကောင်းမြင်အတွေ့အကြုံရှိအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံလိုကြောင်းအစီရင်ခံစာကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုံးစွဲသူသည် voice assistant နှင့်အတွေ့အကြုံကောင်းသောအောက်ပါအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုသုံးစွဲလိုသောကြောင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောဘဏ္seriousာရေးအကျိုးအမြတ်နှင့်ညီမျှသည်။
Capgemini ၏တွေ့ရှိချက်များအရကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်အသံကောင်းသောအသံဖြင့်ကြံဆနိုင်ရန်အတွက်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲရန်လိုအပ်သည် စကားစမြည်ကုန်သွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ။
စက္ကူကို Download လုပ်ပါ
ထုတ်ဖော်: ငါသည်ဤ post ကို၌ငါ့ Affiliate လင့်များကိုအသုံးပြုနေပါတယ်!
Tags: AmazonAmazon ရဲ့ပဲ့တင်သံAmazon ပြပွဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းသီး homepodချစ်သူစကားလက်ဆုံအိမ်မှာ googlepodcast ကျွမ်းကျင်မှုရှုရိလူအသံအသံကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအသံရှာဖွေမှု